Medical mahadum na Russia ogo 2016 - Top ọgwụ mahadum
"EducationBro" Magazine taa kwadebe ogo 2016 nke ọgwụ na ahụ ike na mahadum na Russia maka gị. Anyị na-atụ ozi a ga-enyere mba ụmụ akwụkwọ na-ahọrọ kasị mma nhọrọ ịmụ nkà ọgwụ na Russia. MBBS ọmụmụ na Russian Federation nwere elu àgwà na ala nkuzi ụgwọ.
Ebe a bụ ọnụ ọgụgụ 8 na kacha mma na nkà mmụta ọgwụ mahadum ogo na Russia 2016. ọ bụ Rostov State Medical University. Ọ bụ nnọọ ewu ewu n'etiti ndị mba ọzọ ụmụ akwụkwọ. Ọ n'ezie kwesịrị oge a campuses na ya website na-elekọta mmadụ na netwọk profaịlụ dị ochie. A ezi muta ike ekpuchi ihe niile. University kwesịrị ịrụ ọrụ na onyinyo ya. Otú o sina, nke a bụ ihe magburu onwe ebe na-amụ medicinу na Russia ma ọ bụ ọbụna Europe.
Ọ dịghị obi abụọ, Krasnoyarsk State Medical University bụ otu n'ime ndị kasị mma mahadum dị na Siberia (Region of Russian Federation). O nwere otu nsogbu dị ka a #7 anyị ọgwụ ogo. Anyị nwere ike ikwu, na nke a mahadum nwere nwere otu ọnọdụ anyị ranking. Ma mmadụ ga-adị elu. Anyị na-ekpebi na KrasSMU bụ obere mma. -Ahapụ ịlele a n'afọ ọzọ.
Volgograd State Medical University fọrọ nke nta ahụ dị ka RSMU (#8) na na KrasnSMU (#7). Mahadum ndị a bụ fọrọ nke nta ahụ. Ọbụna ụmụ akwụkwọ na uche dị nnọọ similiar. Ya mere,, ị nwere ike họrọ betweent ndị a mahadum, eche echiche ka ihe atụ, banyere ọdịdị ala ma ọ bụ ihu igwe.
A otutu Russian ọgwụ mahadum nsogbu ke Siberia. Nsogbu bụ na ndị mba ọzọ ụmụ akwụkwọ mîmaha Siberian ihu igwe. Ma ihe nile nke Mahadum ndị a amaka. Ya mere,, Novosibirsk State Medical University na- #5 ọnọdụ anyị n'elu ọgwụ mahadum na Russia 2016.
Siberian State Medical University nwere otu elu àgwà agụmakwụkwọ dị gara aga mahadum. Ma o nwere ihe ọzọ morden campuses na akụrụngwa. Weebụsaịtị bụkwa mma. Foreign ụmụ akwụkwọ hụrụ nke a mahadum, ma ụfọdụ n'ime ha na-adịghị amasị ihu eluigwe Siberia. Ya mere, ọ bụ gị oke. agbanyeghị, Siberia State Medical University bụ na mahadum ndị kacha mma na Russia na bụ #4 na EducationBro ọkwa nke ọgwụ mahadum Russia 2016.
3. Pavlov mbụ Saint Petersburg State Medical University
Saint Petersburg-achọkarị ka Cultural isi obodo nke Russian Federation. Na nke a isi obodo nwere a nnukwu ọnụ ọgụgụ nke oké mahadum. Pavlov mbụ Saint Petersburg State Medical University bụ otu n'ime ihe ndị a na mahadum. Foreign ụmụ akwụkwọ hụrụ ya. Ọ nwere oge a na ngwá na nsogbu na ndị mara mma obodo na nnukwu ọnụ ọgụgụ nke na-akpali ebe. Àgwà nke mmuta bu kwa ihe-elu. SPSMU bụ ezi nhọrọ.
Almost mbụ. A obere bụghị iji merie. Ma n'ebe ọ bụla anyị ranking – a bụ ihe magburu onwe N'ihi. n'Ụzọ Kwekọrọ The Russian National Research Medical University #2 na ogo nke kasị mma ọgwụ mahadum na Russia. Foreign ụmụ akwụkwọ hụrụ ya. Ọ dị na Moscow, isi obodo nke Russian Federation. Ị ga-eche agwụ ike n'obodo a. RNRMU bụ magburu onwe ebe ịmụ nkà ọgwụ na Russia.
1. Mbụ Moscow State Medical University
Ebe a kacha mma ọgwụ mahadum dị na Russia. Ọ bụ ebe kasị mma na-amụ MBBS ma ọ bụ ndị ọzọ na Russian Federation. Ọ bụ otu n'ime ndị kasị mma n'ụwa. ọ bụ Mbụ Moscow State Medical University. Ọ bụ n'ihi nke “EducationBro ọkwa nke ọgwụ na ahụ ike na mahadum na Russia 2016”. MSMU na-ewe #1.